လိင်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများ:ပူပြင်းတဲ့ Xxx ဂိမ်းပျော်စရာအတွင်း
သင်ဆိုရင်လိင်ဟုတ္တယ္မနှင့်အတူအရွယ်ရောက်အစွဲနှင့်သင်ဖြစ်ပျက်ဖို့အတွက်စိတ်အားကစားအချို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသင်ပြောပြဖို့အကြောင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်စီမံကိန်း။ ကျွန်တော်ပြောနည်းသောအထဲကပြန်သွားလေငါတို့ဒါတွေထဲကတစ်ခု၏အကြီးမားဆုံးလိင်ဂိမ်းအသိုင်းအပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ငါပြုချင်ကြပါဘူးအကြွားလွန်အကျွံအနည်းဆုံးမသေးနဲ့!, ကြည့်ရှု၊ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရိုးသားပါလိမ့်မယ်:လိင်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုအားလုံးအရွယ်ရောက်မွာလျှင်သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီမှာလာသောကြောင့်သင်ရုံအချို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူလူနှင့်တိရစ္ဆာန်၊သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါလည်းမင်္ဂလာရှိ၏နှင့်အတူဆိုတဲ့အချက်ကိုယူ sexualization ဒီနေရာမှာအတော်လေးအလေးအနက်အမှန်ပင်။ ကျွန်တော်၏အမြင်ရှိတယ်လို့ဝေးလွန်းအများအပြားဂိမ်းများရှိပါတယ်ထွက်အဆင်းရဲဆှအစည်းအဝေးဂိမ်း၏၊ကျွန်မတို့ကြည့်နေတာကိုပြုပြင်ကြိုးစားနေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်မှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသောအံဝင်ခွင်သို့မျက်နှာဖြေအစည်းအဝေးများ။ ဘာမှားရုံဖြင့်ရိုးသားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအချက်ကိုသင်လုပ်ရချင်သောလိင် furries ဘယ်လိုလဲ?, ဟန်တူအတော်ပီပြင်တဲ့အရာသင်သည်ငါ့ကိုတောင်းလျှင်–ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအလုပ်တွေအများကြီးအတွက်ဤနေရာနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ချင်စိတ်ထင်ကဲ့သို့ကိုယျ့ကိုယျကိုသွား-မှပါဘူးပတ်ပတ်လည်သင်၌စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ။ ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပါတယ်တစ်ဦးအင်ပါယာကိုငါသဘောမျိုးတွေအများကြီးသင်တို့အဘို့အကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဘယျအရာငါတို့သည်ကိုယ်အဘို့ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဘယ်လိုအမှုအရာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုအကောင်းဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်တစ်အများကြီးအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်သေချာအောင်လုပ်ဂရပ်ဖစ်ဒီမှာလိင်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ဒါဟာအပ်သွားဖို့ပြောဘဲမရှိဘဲအကြောင်းကျွန်တော်ဆွဲအကောင်းဆုံးဒြပ်စင်ကိုကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းတွေ့အကြုံအရှိဆုံးအုပ္ဆုိင္ဒါကြောင့်ပတ်ပတ်လည်သင်ရနိုင်သောအရာကိုသိရန်အလွန်ကြီးစွာသောကားအသစ္တစ္လံုးအားလုံး–အားလုံးမပါဘဲမဆိုသောက်သုံးတဲ့အစဉ်အလာဖြစ်ဖို့အသုံးပြု။ အဲဒီမိုကမဟုတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုလုပ်မပါဘဲကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ကောင်းရုံမှာကြည့်ခရီးစဉ်မှာအကြှနျုပျကိုပြောပြပါအဲဒီဂရပ်ဖစ်မဟုတ်အများဆုံးမယုံနိုင်စရာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ယနေ့အချိန်တွင်!, ဒါကြောင့်အများကြီးလုပ်ပြီထားသို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအဖြစ်ကိုကြည့်အလွန်ကြီးစွာသော၊နှင့်အပြည့်အဝစုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်အတွင်းကြ၏အလားတူအရည်အသွေးနှင့်အဆင့်။ ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရတဲ့အမှားတွေကနေအခြားပလက်ဖောင်းနှင့်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်တစ်ဦးတပြင်လုံးကိုအဆင့်သစ်အကြောက်မက်ဘွယ်။ အဖြစ်ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်စေခြင်းငှါ၊သူတို့သွားဘယ်တော့မှမဖွင့်ရှိသည်ဖို့နိုင်စွမ်းပေးစေခြင်းငှါအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိပါတယ်အဘယျသို့သူတို့လိုချင်တဲ့အဘယ်အရပ်ကြှနျုပျတို့ဖြစ်ကြောင်း၊အများကြီးတစ်ငရဲ၏ညမ်းဂိမ်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာများ၏အဘယ်သူမျှမကိုသောက်သုံးမကျတဲ့အတွက်ရောထွေး။, ခ်စ္ပဒီလုပ်ငန်းမှာအတွက်၊ဆိုတော့သင်တို့၏လက်ချောင်းအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းများနှင့်အတူအရွယ်ရောက်လိင်တူအာရုံစူးစိုက်သည်အတော်လေးခက်ခဲ? ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်! မဖော်ပြထားသောဝက်၏အခြားဂိမ်းတွေထွက်ရှိဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတူကြည့်ရှုအကြွင်းမဲ့မြည်း။
ကျနော်တို့လုပ်ထားပါတယ်အတိအဝန်းထွက်ရှိသောအရွယ်ရောက်လိင်လိင်ဂိမ်းများလိမ့်မည်အမြဲတမ်းအခမဲ့ကစားရန်ပလက်ဖောင်း။ အိုး၊ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနိုင်ရမှပေးဆောင်ဒြပ်စင်များသို့မဟုတ်အခြားအဓိပ္ပါယ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေကြောင်း–သင်ယ်ယူနိုင်ပါသည်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းအသက်သက်သာတိုးတက်လာဖို့သင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်အထောက်အကူပြုရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုအပ်ပါဘူးသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ၊အကြီးလျှင်မူကားသင်ပေးခြင်းအားတူခံစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သော၊တာခဲလှ၏အဖွင့်မယ်။, ငါရဲ့စဉ်းစား၊ပြောဆိုရန်တရားမျှတသည်လိင်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းလုပ်နေတယ်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်မှကြွလာသောအခါဂိမ်းကစားစွမ်းရည်နှင့်အတူကစားရန်မိမိတို့လိင်လိင်ဂိမ်းအခမဲ့များအတွက်:အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏တက်လက်မှတ်ထိုးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတာနဲ့အတွင်းပိုင်း၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်! အရှိန်အလျှင်မသင်ပေးနှင့်အတူကြီးမြတ်ဂိမ်း၊သင်ရုံထားခဲ့ပါ၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့ရုန်းကန်စွန်းတွေ့ဆုံရန်စေရန်။ ဒီပြီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကြီးမားတဲ့မက်လုံးပေးစောင့်ရှောက်ဖို့ဂိမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပါမည်နှင့်အင်း–ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်လိင်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများဘို့အကဒီမှာနှစ်ခုလုံးကိုအကောင်းတစ်ဦးအချိန်နှင့်အချိန်အကြာ!
အားပေးတော်မူပြီအဘယျသို့သားဖတ်၊ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်တရားမျှတသည်လိင်ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများသည်အကျင့်ကိုကျင့်၏တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းအလုပ်မှာသင်၏တက်လက်မှတ်ထိုးသလား? သေချာတာဒါကြောင့်မျှော်လင့်သောကြောင့်၊သင်ရနိုင်အတွင်းအပြင်နှင့်ထွက်ကြိုးစားအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အခုအချိန်မှာအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အဆင်ပြေ။ အခြားအရပ်မဟုတ်၊သွားနိုင်စေဖို့အရွယ်ရောက်လိင်ချမ်းသာချင်ကြောင်း၊ဒါကြောင့်အနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းနဲ့သူတို့ကိုအခါ၊သင်ရုံရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဖမ်းခွင့်ပြုကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အထင်ကြီးစုဆောင်းမှု။, ကျွန်တော်ပြထားတဲ့အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကျနော်တို့သိရန်ကြာမြင့်သောအရာကို၏ထိပ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်သောအစားအစာကွင်းဆက်များအတွက်ဒီနေရာ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မြည်းကိုဘုတ်အဖွဲ့တွင်စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့!